လူပြောများနေတဲ့ တဒုန်းဒုန်းမြည်နေတဲ့ ဗီဒိုကြီးအကြောင်း ပန်ဆယ်လို ပြော – PAPAWADY
Posted on May 15, 2018 May 15, 2018 by papawady
အွန်လိုင်းမှာ လူပြောများနေတဲ့ ဗီဒိုကြီး အကြောင်းအွန်လိုင်းဆယ်လီ တစ်ဦးဖြစ်သူ ပန်ဆယ်လို က ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး ပြန်ရှင်းပြထားဟာ အင်မတန်လူပြောများနေပါတယ်။ အောက်မှာ မူရင်းဗီဒီယို နဲ့ ပန်ဆယ်လိုရဲ့ရေးသားချက်တွေပါဝင်ပါတယ် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ငြင်းခုန်မှုတွေရှိနေသလို လှောင်ပြောင်တဲ့ သူတော်တေ်ာများများလည်းရှိနေပါတယ်။
သိပ်စပ်စပ်စုစုနိုင်တာပဲလို့ ပြောရင်လည်း ခံရမှာပဲ ဂျီးတော်တို့ရေ။မနေ့ည ၁၀နာရီလောက်က Live Video တစ်ခု ကြည့်လိုက်ရတယ်။ဘာမှမရှိပါဘဲ တဒုန်းဒုန်းမြည်နေတဲ့ ဗီဒိုကြီး။ အယ့်လယ်…. မိုက်သဟဆိုပြီး ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ထိုင်ကြည့်နေလိုက်သေး။
ခဏနေတော့ ဂရုချက်ထဲမှာ ကွီးမောင်မောင်အေးက ပြောတယ်။အာ့ သူ့မိတ်ဆွေအိမ်တဲ့။ ခု သွားကြည့်နေပြီဆိုပဲ။ ကြည့်ချင်ရင်လာခဲ့တဲ့။ နာရီကြည့်တော့ ၁၁နာရီခွဲနေပြီ။ ငင့်… ဒါကြီးသွားကြည့်ပြီး ည၁၂နာရီလောက်ကြီး ကားမောင်းပြန်ရမှာတော့ ဒေါ်ပန့်လို သတ္တိခဲအနေနဲ့ ငှင်းငှင်းပေါ့။ ကြည့်ကလည်း ကြည့်ချင်ဆိုတော့ အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ အဖေရောအမေရော အကုန်နှိုးပြီးအိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ချီတက်သွားတော့တယ်။ ဟိုရေက်တော့ ဇာတ်လိုက်ကျော် ဗီဒိုကြီးနဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေပြန်ရော။ကိုယ်က ဗီဒိုထက် ဗီဒိုပိုင်ရှင်ဦးလေးကြီးကို ပိုစိတ်ဝင်စားမိတယ်။ အိမ်ထဲဝင်သွားတာနဲ့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေဆိုတာ မနည်းမနောပဲ။ ဓါတ်လိုလို နတ်လိုလိုလားလို့ တွေးထင်မိသမျှလည်း ဟီးထနေတဲ့ဘုရားစင်ကြီးမြင်ပြီး အားတုံ့အားနာတောင် ဖြစ်မိတယ်။ မိခင်ရဲ့ခြေရာကို ရွှေချပြီး ကိုးကွယ်ထားတာတို့ ရွှေသားအစစ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဘုရားဆင်းတုတော်လေးတွေကိုလည်း ဖူးခဲ့ရတယ်။ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာက အဲ့ဒီဦးလေးဟာ ၈၈အရေးအခင်းမှာ ကျည်ဆံ၈ချက်မှန်ပြီး အသက်မသေခဲ့ဘူးဆိုတာပဲ။ထုတ်ချင်းပေါက်ကျည်ဆန်ရာတွေ၊ ခွဲစိတ်ထားတဲ့ ဓါးဒဏ်ရာတွေဆိုတာ တစ်ကိုယ်လုံးနီးပါးပဲ။ဘဝမှာ ကျည်ဆန်ရာဆိုတာ အခုမှအသေအချာမြင်ဖူးခဲ့တာ။ ပိုအံ့သြတာတစ်ခုက ခေါင်းထဲကို ဝင်ထားတဲ့ ကျည်ဆန်တစ်တောင့်ဟာ အခုထိထုတ်လို့မရသေးဘဲ အခုထိရှိနေသေးတယ်ဆိုတာပဲ။ပြည်ပခရီးထွက်တိုင်း လေဆိပ်က XRay ထဲမှာ ပေါ်လို့သွားလေရာ ဆေးစာယူသွားရတယ်တဲ့။ခဏခဏသေဘေးနဲ့ ကြုံရပေမယ့် သေကံမရောက်ခဲ့တာက မိဘဂုဏ်ကျေးဇူးလို့ ဦးလေးကြီးက ပြောပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင် ကျည်ဆန်ရှစ်ချက်ထိပြီး မသေဘူးလို့ တစ်ယောက်ယောက်က ပြောရင် ကိုယ်ယုံမှမဟုတ်ဘူး။ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဆိုတော့ အသက်ပြင်းလွန်းတဲ့လူပါလား လက်ခံရတော့တယ်။နောက်တစ်ခုက ဗီဒိုကိစ္စ။Live ကြည့်တုန်းက အသံမြည်နေတာကို နောက်က တစ်ယောက်ယောက်ထုနေတာလားလို့ တွေးမိတယ်။
ဟိုရောက်တော့ အဲ့အတွေးကတော့ ရှင်းသွားတယ်။ဗီဒိုနောက်မှာ ဝင်စရာနေရာမရှိသလို အိမ်ရဲ့အနေအထား ဗီဒိုတည်ရှိပုံအရ နောက်က တစ်ယောက်ယောက် ဝင်ထုနေဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တာ သေချာတယ်။ကျန်တာတော့ ကိုယ်လည်း ဉာဏ်မမှီလို့ မပြောတတ်။ ဒီဗီဒိုကို ရှမ်းပြည်က ဝယ်လာခဲ့တာ၊ လက်ထဲရောက်နေတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာနေပါပြီတဲ့။ ပုံစံတူဗီဒို သုံးလေးလုံးရှိတဲ့အထဲမှာ ဒီဗီဒိုဟာ နေရာရွေ့တာတို့ လေထဲမြောက်နေတာတို့ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့။ CCTV မှတ်တမ်းတွေလည်း ရှိပါတယ်တဲ့။ တစ်ခေါက်ကဆို ဗီဒိုခြေထောက်ကို ကြိုးနဲ့ချည်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပေါင်ဒါမှုန့်တွေဖြူးထားပြီး စမ်းသပ်တာ နောက်နေ့မှာ ပေါင်ဒါမှုန့်တွေ ခြေရာလက်ရာမပျက်ဘဲ ကြိုးပြည်ပြီး ရှေ့နှစ်တောင်လောက် နေရာရွေ့နေပါသတဲ့။ဒီဗီဒိုကို ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ အိမ်တွေကို ပေးပစ်ခဲ့ပေမယ့် နှစ်ရက်သုံးရက်နေရင် ပြန်လာယူခိုင်းကြပါတယ်တဲ့။ ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ ဘယ်သူကမှ မဖြေကြပါဘူးတဲ့။ ငမိုးရိပ်ချောင်းထဲထိ သွားပစ်တာ နောက်နေ့ အိမ်ရှေ့ပြန်ရောက်နေတာမျိုး ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့။ကိုယ်တို့ရောက်သွားချိန်မှာ အသံတော့မကြားရတော့ပါဘူး။ ကိုယ်ထူးဆန်းတယ်လို့ ထင်မိတာကတော့ ဗီဒိုထဲက ရနံ့ပါ။ဘာနံ့လို့ပြောပြရခက်သလို ရနံ့က ပုံသေမဟုတ်ဘဲ ပြင်းလိုက် ပျောက်သွားလိုက်နဲ့ပါ။ ကိုယ်တော့ ဗီဒိုထဲ ခေါင်းဝင်ပြီး ခဏခဏ ဝင်အနံ့ရှူဖြစ်တော့တာပဲ။ယုံတယ် မယုံတယ်ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။သိရသလောက် ပြန်ပြောပြတာ… ကိုယ်လည်း ဉာဏ်မမှီဘူးရယ်။ ဒီဦးလေးရဲ့ ဘဝအနေအထား လူနေမှုအဆင့်အတန်းဟာ ဖဘမှာ Attention ရှာပြီး စီးပွားရှာမရိုးမသား လုပ်စရာမလိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာတော့ သိလိုက်ရတယ်။တစ်ခါတရံ လောကမှာ မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင် အသိတရားနဲ့ မမှီနိုင်တာတွေ အများကြီးပါလားပေါ့။ထူးဆန်းတာကို ထူးဆန်းတယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ရပ်ထားလိုက်နိုင်ရင် ဥပါဒါန်တွေ ဥပဒ်တွေအဆင့်ကို ရောက်လာနိုင်စရာအကြောင်းမှ မရှိတာပဲလေ။” ဆိုကာ ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Unicode
အှနျလိုငျးမှာ လူပွောမြားနတေဲ့ ဗီဒိုကွီး အကွောငျးအှနျလိုငျးဆယျလီ တဈဦးဖွဈသူ ပနျဆယျလို က ကိုယျတိုငျသှားရောကျလလေ့ာခဲ့ပွီး ပွနျရှငျးပွထားဟာ အငျမတနျလူပွောမြားနပေါတယျ။ အောကျမှာ မူရငျးဗီဒီယို နဲ့ ပနျဆယျလိုရဲ့ရေးသားခကျြတှပေါဝငျပါတယျ ဖတျကွညျ့လိုကျပါဦး။ ဒါနဲ့ ပတျသတျပွီး ငွငျးခုနျမှုတှရှေိနသေလို လှောငျပွောငျတဲ့ သူတျောတျောမြားမြားလညျးရှိနပေါတယျ။ “သိပျစပျစပျစုစုနိုငျတာပဲလို့ ပွောရငျလညျး ခံရမှာပဲ ဂြီးတျောတို့ရေ။မနညေ့ ၁၀နာရီလောကျက Live Video တဈခု ကွညျ့လိုကျရတယျ။ဘာမှမရှိပါဘဲ တဒုနျးဒုနျးမွညျနတေဲ့ ဗီဒိုကွီး။ အယျ့လယျ…. မိုကျသဟဆိုပွီး ကွညျ့ကောငျးကောငျးနဲ့ ထိုငျကွညျ့နလေိုကျသေး။ခဏနတေော့ ဂရုခကျြထဲမှာ ကှီးမောငျမောငျအေးက ပွောတယျ။အာ့ သူ့မိတျဆှအေိမျတဲ့။ ခု သှားကွညျ့နပွေီဆိုပဲ။ ကွညျ့ခငျြရငျလာခဲ့တဲ့။ နာရီကွညျ့တော့ ၁၁နာရီခှဲနပွေီ။ ငငျ့… ဒါကွီးသှားကွညျ့ပွီး ည၁၂နာရီလောကျကွီး ကားမောငျးပွနျရမှာတော့ ဒျေါပနျ့လို သတ်တိခဲအနနေဲ့ ငှငျးငှငျးပေါ့။ ကွညျ့ကလညျး ကွညျ့ခငျြဆိုတော့ အိပျပြျောနရှောတဲ့ အဖရေောအမရေော အကုနျနှိုးပွီးအိပျခငျြမူးတူးနဲ့ ခြီတကျသှားတော့တယျ။ ဟိုရကျေတော့ ဇာတျလိုကျကြျော ဗီဒိုကွီးနဲ့ တှခေဲ့ပါတယျ။ ငွိမျခကျြသားကောငျးနပွေနျရော။ကိုယျက ဗီဒိုထကျ ဗီဒိုပိုငျရှငျဦးလေးကွီးကို ပိုစိတျဝငျစားမိတယျ။ အိမျထဲဝငျသှားတာနဲ့ ရှေးဟောငျးပစ်စညျးတှဆေိုတာ မနညျးမနောပဲ။ ဓါတျလိုလို နတျလိုလိုလားလို့ တှေးထငျမိသမြှလညျး ဟီးထနတေဲ့ဘုရားစငျကွီးမွငျပွီး အားတုံ့အားနာတောငျ ဖွဈမိတယျ။ မိခငျရဲ့ခွရောကို ရှခေပြွီး ကိုးကှယျထားတာတို့ ရှသေားအစဈနဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ ဘုရားဆငျးတုတျောလေးတှကေိုလညျး ဖူးခဲ့ရတယျ။ကိုယျစိတျဝငျစားတယျဆိုတာက အဲ့ဒီဦးလေးဟာ ၈၈အရေးအခငျးမှာ ကညျြဆံ၈ခကျြမှနျပွီး အသကျမသခေဲ့ဘူးဆိုတာပဲ။ထုတျခငျြးပေါကျကညျြဆနျရာတှေ၊ ခှဲစိတျထားတဲ့ ဓါးဒဏျရာတှဆေိုတာ တဈကိုယျလုံးနီးပါးပဲ။ဘဝမှာ ကညျြဆနျရာဆိုတာ အခုမှအသအေခြာမွငျဖူးခဲ့တာ။ ပိုအံ့သွတာတဈခုက ခေါငျးထဲကို ဝငျထားတဲ့ ကညျြဆနျတဈတောငျ့ဟာ အခုထိထုတျလို့မရသေးဘဲ အခုထိရှိနသေေးတယျဆိုတာပဲ။ပွညျပခရီးထှကျတိုငျး လဆေိပျက XRay ထဲမှာ ပျေါလို့သှားလရော ဆေးစာယူသှားရတယျတဲ့။ခဏခဏသဘေေးနဲ့ ကွုံရပမေယျ့ သကေံမရောကျခဲ့တာက မိဘဂုဏျကြေးဇူးလို့ ဦးလေးကွီးက ပွောပါတယျ။အမှနျတိုငျးပွောရရငျ ကညျြဆနျရှဈခကျြထိပွီး မသဘေူးလို့ တဈယောကျယောကျက ပွောရငျ ကိုယျယုံမှမဟုတျဘူး။ မကျြမွငျကိုယျတှဆေို့တော့ အသကျပွငျးလှနျးတဲ့လူပါလား လကျခံရတော့တယျ။နောကျတဈခုက ဗီဒိုကိစ်စ။Live ကွညျ့တုနျးက အသံမွညျနတောကို နောကျက တဈယောကျယောကျထုနတောလားလို့ တှေးမိတယျ။ဟိုရောကျတော့ အဲ့အတှေးကတော့ ရှငျးသှားတယျ။ဗီဒိုနောကျမှာ ဝငျစရာနရောမရှိသလို အိမျရဲ့အနအေထား ဗီဒိုတညျရှိပုံအရ နောကျက တဈယောကျယောကျ ဝငျထုနဖေို့ ဘယျလိုမှ မဖွဈနိုငျတာ သခြောတယျ။ကနျြတာတော့ ကိုယျလညျး ဉာဏျမမှီလို့ မပွောတတျ။ ဒီဗီဒိုကို ရှမျးပွညျက ဝယျလာခဲ့တာ၊ လကျထဲရောကျနတော နှဈပေါငျးမြားစှာ ကွာနပေါပွီတဲ့။ ပုံစံတူဗီဒို သုံးလေးလုံးရှိတဲ့အထဲမှာ ဒီဗီဒိုဟာ နရောရှတေ့ာတို့ လထေဲမွောကျနတောတို့ ထူးထူးဆနျးဆနျးတှေ ဖွဈတတျပါတယျတဲ့။ CCTV မှတျတမျးတှလေညျး ရှိပါတယျတဲ့။ တဈခေါကျကဆို ဗီဒိုခွထေောကျကို ကွိုးနဲ့ခညျြဘေးပတျဝနျးကငျြမှာ ပေါငျဒါမှုနျ့တှဖွေူးထားပွီး စမျးသပျတာ နောကျနမှေ့ာ ပေါငျဒါမှုနျ့တှေ ခွရောလကျရာမပကျြဘဲ ကွိုးပွညျပွီး ရှနှေ့ဈတောငျလောကျ နရောရှနေ့ပေါသတဲ့။ဒီဗီဒိုကို ဘုနျးကွီးကြောငျးတှေ အိမျတှကေို ပေးပဈခဲ့ပမေယျ့ နှဈရကျသုံးရကျနရေငျ ပွနျလာယူခိုငျးကွပါတယျတဲ့။ ဘာအကွောငျးလဲဆိုတော့ ဘယျသူကမှ မဖွကွေပါဘူးတဲ့။ ငမိုးရိပျခြောငျးထဲထိ သှားပဈတာ နောကျနေ့ အိမျရှပွေ့နျရောကျနတောမြိုး ကွုံခဲ့ဖူးပါတယျတဲ့။ကိုယျတို့ရောကျသှားခြိနျမှာ အသံတော့မကွားရတော့ပါဘူး။ ကိုယျထူးဆနျးတယျလို့ ထငျမိတာကတော့ ဗီဒိုထဲက ရနံ့ပါ။ဘာနံ့လို့ပွောပွရခကျသလို ရနံ့က ပုံသမေဟုတျဘဲ ပွငျးလိုကျ ပြောကျသှားလိုကျနဲ့ပါ။ ကိုယျတော့ ဗီဒိုထဲ ခေါငျးဝငျပွီး ခဏခဏ ဝငျအနံ့ရှူဖွဈတော့တာပဲ။ယုံတယျ မယုံတယျပွောနတော မဟုတျပါဘူး။သိရသလောကျ ပွနျပွောပွတာ… ကိုယျလညျး ဉာဏျမမှီဘူးရယျ။ ဒီဦးလေးရဲ့ ဘဝအနအေထား လူနမှေုအဆငျ့အတနျးဟာ ဖဘမှာ Attention ရှာပွီး စီးပှားရှာမရိုးမသား လုပျစရာမလိုတဲ့လူတဈယောကျဆိုတာတော့ သိလိုကျရတယျ။တဈခါတရံ လောကမှာ မကျြစိနဲ့မမွငျနိုငျ အသိတရားနဲ့ မမှီနိုငျတာတှေ အမြားကွီးပါလားပေါ့။ထူးဆနျးတာကို ထူးဆနျးတယျဆိုတဲ့ နရောမှာ ရပျထားလိုကျနိုငျရငျ ဥပါဒါနျတှေ ဥပဒျတှအေဆငျ့ကို ရောကျလာနိုငျစရာအကွောငျးမှ မရှိတာပဲလေ။” ဆိုကာ ဖဘှေ့တျချမှာရေးသားထားတာဖွဈပါတယျ။
မူရင်း ဗီဒီယိုလင့် – ဗီဒိုကြီးအကြောင်း
Posted in သတင်းTagged ထူးထူးဆန်းဆန်း, ပန်ဆယ်လို